Ecology - Nidaamka Baradhada
Isbeddello deegaan. Baakadaha ayaa dib loo warshadeeyay, oo loo rogay maraqa, ama si fudud ayaa loo dhalalaa
Saynisyahanada ayaa leh culeys muhiim ah: in la abuuro baakad waarta, iyadoo laga fogaanayo balaastikada iyo waxyaabaha kale ee la safeeyay, iyada oo aan kicinta xaalufinta dhirta ...
Saynisyahanno ka socda Jaamacadda farsamada ee Astrakhan ayaa sameeyay filim shaashad ah oo nooceeya biodegradable-ka kaas oo la tartami kara agabyada polymer ka caagga ah. Maqaalka ugu weyn ee samaynta ...
Bishii Juun 16, warbixin ayaa lagu daabacay koox ka mid ah saynisyahannada Ruushka iyo Yurub (wakiilo ka socda Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska, Holland, Jarmalka iyo Switzerland), kuwaas oo bartay ...
Iyadoo adduunka oo dhan uu la dagaallamayo coronavirus-ka, Yurub waxay wajaheysaa khatar dheeri ah. Abaarta daran awgeed, dalaggu wuu dhintaa, ma jiraan wax lagu quudiyo xoolaha, way burbureen ...
“Maaddaama Yurub ay yareynayso ku tiirsanaanta beero-kiimikada beeraha 10-ka sano ee soo socota iyo ...
Miyaad raadineysaa ereyga "dabiici ah" cunnooyinka aad soo iibsatid? Maalmahan, qaar badan ayaa sameeya. Baahida Macaamiisha ayaa riixeysa ...
Waxaa jira dad badan oo raacaya cunnooyin caafimaad qaba, laakiin ma cunayaan cunno aamin ah? Wax soo saarka Bio, 100 boqolkiiba dabiiciga ah, bay'ada u fiican - kuwan ...
Kooxda Agrochemical-ka ayaa si isa soo taraysa u xiiseeya horumarinta iyo soo-saarka wax soo saarka bayoolojiga si loo ilaaliyo dalagyada muhiimka ah, laakiin waa kuwee dhirta noqonaysa tii ugu horreysay ee siisa agab ceyriin tartan ah? ...
Wasaaradda Kheyraadka Dabiiciga ah ayaa soo saartay mashruuc, kaas oo mas'uuliyadiisu tahay in laga baaraandego dhammaan noocyada baakadaha, saliidaha iyo baytariyada laga bilaabo 2021 loo qoondeeyo inay toos u ...